Slackware 14.1: စပိန်ဘာသာဖြင့် Mozilla Firefox | Linux မှ
Slackware 14.1: စပိန်ဘာသာဖြင့် Mozilla Firefox
DMoZ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, applications များ, ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
SlackTip # 3: စပိန်ဘာသာဖြင့် Mozilla Firefox
အသုံးပြုသူများကိုနည်းနည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာများထဲမှတစ်ခု Slackware ကိုတီထွင် စပိန်စကားပြောသူသည်သင်၏စနစ်သည်စပိန်ဘာသာဖြင့်လုံးဝနီးပါးဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့် browser ကိုသုံးသည် (Mozilla Firefox ကို) ဒီဖြန့်ဖြူးအတူမဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်လိုသိလဲ Slackware ကိုတီထွင်ထုပ်ပိုးမှု၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများမဟုတ်ပါကတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းများကိုမသုံးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ hangover” (အထူးသဖြင့်ယင်း၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သောဘရောက်ဇာ၏ဂင်းနစ်စံချိန်ရှိသည့်ဘရောင်ဇာအကြောင်းပြောဆိုလျှင်) ကျွန်ုပ်တို့တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ) ။
ဒီဥပမာအတွက်ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ရှိဗားရှင်းကိုယူမယ် Mozilla Firefox 31.2.0 ။
ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ဖို့ကြိုးစားလျှင် ဘာသာစကားအစီအစဉ် ကျနော်တို့ကအံ့အားသင့်စရာရှာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗားရှင်းအတွက်မရနိုင်ပါ (31.2.0) လက်ရှိတစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းက 33.1 သူတို့သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားအစီအစဉ်၏စာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးသို့သွားသည်။ ထိုတွင်ဒဏ္«ာရီကိုတွေ့လိမ့်မည်။ဗားရှင်းသတင်းအချက်အလက်»ရွေးစရာကိုပြသရန်မည်သည့်ကလစ် နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်ကို«အပြည့်အဝဗားရှင်းသမိုင်းကြည့်ရှုပါ"။
ငါတို့ရွေးသည်eငါတို့ install လုပ် ငါ့အဘို့ဗားရှင်းငါတို့အမှု၌မှန်ကန်သော 31.0.
ငါတို့ကabout: config ကို»လိပ်စာဘားတွင်အိမ်ခြံမြေကိုချက်ချင်းရှာဖွေသည်။အထွေထွေ .useragent.locale"(ကိုးကားအမှတ်အသားများမပါဘဲ) ။
ငါတို့ပြောင်းလဲခဲ့တယ် el ရဲစွမ်း «en-US"ဖြင့်"es-MX» (ကျွန်ုပ်၏ဖြစ်ရပ်ကြောင့်ဖြစ်သည် မက္ကစီကို), ငါတို့ပြန်လည်စတင် Firefox ကို နှင့် voila, ငါတို့ဘာသာစကားမှာ interface ကိုရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Slackware 14.1: စပိန်ဘာသာဖြင့် Mozilla Firefox
ကောင်းမွန်သောအကြံပေးချက်… Slackware ကိုအသုံးပြုသောအခါ Firefox နှင့် Thunderbird ကိုကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုခဲ့သည်။
အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Abrowser မှာအတော်လေးအသုံးဝင်ပါသည်
နောက်ဆုံးထွက် Firefox ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပါ။ လက်ရှိအသုံးမပြုဘဲ
ဝဗ်ပေါ်မှ Firefox ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်း / ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဤအထုပ်ကို download လုပ်၍ ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်စေ -
32 bit နဲ့
64 bit နဲ့
နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သော version နှင့် "current - current" အကြားရှိ "အချိန်အကွာအဝေး" မများသည့်အခါဤအစုများသည်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်မှီခိုမှုအသစ်များကိုဖန်တီးပြီးထိုအစုများမှအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ slackpkgplus ကို အသုံးပြု၍ 14.1 အတွက်တည်ဆောက်ထားသော package များရှိမရှိသိရန်သင်ကံကောင်းပါစေ။
၎င်းတို့သည် slackbuild သို့မဟုတ် backback ၏အကူအညီဖြင့်စုစည်းထားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည် (README၊ INSTALL၊ လျော့နည်းပါ။ / Configure, လုပ်၊ install လုပ်ရန် DESTDIR = paketo, cd paketo, makepkg, installpkg) သင်ကြိုက်သည့်မူကွဲအားလုံး -
၁၇.x မှ ၃၁.x မှအောင်မြင်စွာနှင့်အောင်အောင်မြင်မြင်ပြုစုရန်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုအခက်အခဲမရှိဘဲပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။ သင်သည် 17-31GB အခမဲ့ disk space 4K အတွက် 7bit အတွက်စုစည်းရန် "PGO" optimization မပါဘဲလိုအပ်သည်မှ လွဲ၍ ~ Core32 @ 32GHz ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ၄၀ မိနစ်မှ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ် (ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိရိယာများသည် Ram တွင်အနိမ့်ကျသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကွာခြားသည်ထင်သည်။ swap ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်မှာ - /) ။
နီကိုးလပ် ortiz ဟုသူကပြောသည်
nicolas ortiz သို့ပြန်သွားပါ
စပိန်စကားပြော Slackware အသုံးပြုသူများကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ ၄ င်းတို့၏စနစ်သည်စပိန်လိုလုံးဝနီးပါးဖြစ်သော်လည်းဤဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပါရှိသော default browser (Mozilla Firefox) သည်မဟုတ်ပါ။
အဖြစ်? စိန့် Volkerding ထက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဝံ့သောသူရှိပါသလား
နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို install လုပ်ရန်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ်လာသော esr ကိုငါမစွန့်လိုပါ။ အောက်ဖော်ပြပါသည် Firefox ၏မူကွဲအသစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းရန်သင်ခန်းစာဖြစ်သည် http://vidagnu.blogspot.com/2012/03/firefox-en-slackware.html
ဤအကြံပြုချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို Slackware အသစ်တွေအများကြီးကူညီပေးတယ်
ဤအကြံပြုချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Slackware ထဲမှစတင်သည့်သူများသည်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူတို့ဟာ Gnome3နဲ့ Cinnamon ကိုမထောက်ပံ့နိုင်လို့ပါ
ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်ထည့် ၀ င်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Slackware ၌နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာပေါ် မူတည်၍ ဤဖြန့်ဖြူးမှုကိုအသုံးပြုသောသူများသည်အခြေခံအားဖြင့်စမ်းသပ်ထားသော packets များနှင့်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သောနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများနှင့်သာအောင်မြင်မှုရခြင်းအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုပါလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာအရမ်းခေတ်နောက်ကျတယ်၊ အထူးသဖြင့် browser (ဘရောက်ဆာ) အရဆိုရင် ... Slackware ကိုသုံးတဲ့ငါတို့ရဲ့တီထွင်သူတွေရဲ့အတွေးအမြင်ကိုအများအားဖြင့်သဘောတူလို့ ...
ကြီးမားသောဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုတွင်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းများကိုနှစ်သက်လိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည့် Arch Linux ကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သူတို့ဟာအောက်မှာမှတ်ချက်ပေးတဲ့အတိုင်း၊ အထင်ရှားဆုံးနီးပါးဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ သင် mozilla ဖောင်ဒေးရှင်း၏ binaries များကိုပါထုပ်ပိုးပြီးတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ကျွန်တော့်မှာ browser ကအရည်နည်းတယ်လို့ခံစားမိလို့သူတို့ကိုတောင်မစဉ်းစားမိပါဘူး။ အားသာချက်အားဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုပါကခရိုမီယမ် binaries များ (https://commondatastorage.googleapis.com/chromium-browser-snapshots/Linux/....... ။ )
Linux ပေါ်တွင် SQLite ဖိုင်များဖွင့်လှစ်ရန်ဂရပ်ဖစ် application များ
Devuan: Habemus လမ်းဆုံလမ်းခွ